सबै पार्टीले प्रस्ताव गरेका छन्, अप्सनहरू खुल्ला राखेको छुः रवि लामिछाने – Nepal Press
सबै पार्टीले प्रस्ताव गरेका छन्, अप्सनहरू खुल्ला राखेको छुः रवि लामिछाने
२०७९ असार २ गते २०:०७
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने अन्ततः राजनीतिमा होमिएका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने योजनासहित उनले बिहीबार ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बिदा लिए ।
लामिछानेले राजनीतिमा आउने घोषणा गरे पनि धेरै प्रश्न अनुत्तरित राखेका छन् । पार्टीबाट वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पनि भनेका छैनन् । काठमाडौंमा बालेन्द्र साहले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेपछि रविले पनि हौसिएर उम्मेदवारी दिन लागेकोसमेत चर्चा छ ।
यद्यपि, रविले आफू राजनीतिमा आउने पहिल्यैदेखिको योजना रहेको बताए । अहिले उठेका सबै जिज्ञासाको जवाफ आफूले आगामी ७ गते दिने उनको भनाइ छ ।
रविसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
अब के नयाँ पार्टी नै गठन गर्न लाग्नुभएको हो ?
त्यसको तयारी गरिसकेको छैन । कसरी अगाडि बढ्ने भनेर बताउन ७ गतेसम्ममा तयार हुन्छु । अहिले केही पनि फाइनलाइज गरेको छैन । सबै विकल्प खुल्ला छन् । कुनमा जाने भन्ने तय गर्न बाँकी छ ।
कुनमा जाने भन्नाले तपाईं कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
स्वतन्त्र चुनाव लड्ने, भएका राजनीतिक दलमध्ये एउटामा लाग्ने वा आफैले दल निर्माण गर्ने सबै अप्सनमा हामी काम गरिरहेका छौं । तर टुंगोमा पुगेको छैन । ७ गतेसम्म पर्खिन आग्रह गर्छु ।
तपाईंसँग राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कुराकानी भएको हो ?
मेरो सबैजनासँग कुराकानी भएको छ । जस्तै को–कोसँग ? मेरो मतलब, उहाँसँग मात्रै नभएर सबै राजनीतिक दलसँग कुरा भएको छ । कांग्रेसको कसैसँग, एमालेको कसैसँग, राप्रपाको पनि कसैसँग भएको होला ।
लिङदेनले चाहिँ राप्रपामा आउनुपर्यो भन्ने गम्भीर प्रस्ताव गर्नुभएको छ रे नि ?
अरुले पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ । खासमा सबैले गर्नुभएको छ ।
भन्नाले कांग्रेस–एमालेले पनि प्रस्ताव गरेका छन् ?
कुन तहको भन्ने हो, तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले सबैबाट कुनै न कुनै प्रस्ताव आएको छ ।
बलियो सम्भावना चाहिँ के छ, स्वतन्त्र लड्ने कि पार्टीबाट ?
हामी निर्णयको चरणमा पुग्दैछौं । अहिले भन्ने समय आइसकेको छैन ।
आगामी चुनावलाई लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि संगठित हुन लागेको चर्चा सुनिन्छ, त्यसमा तपाईं पनि संलग्न हुनुहुन्छ ?
म अहिलेसम्म त्यसमा छैन । त्यो मैले पनि सुनेको छु । म अवश्य सल्लाह गर्छु । आउनुस न मिलेर जाउँ भन्ने त भइहाल्छ । सिरियस लेभलमा मलाई कसैले भनेको छैन ।
सञ्चारकर्मीका रुपमा यत्रो लोकप्रियता पाउनुभो । जनताले माया गरेका छन् । यो पेशालाई चटक्कै छोडेर राजनीतिमा आउने निर्णय लिन कत्तिको गाह्रो भयो ?
यो अब समयले गर्दा पनि …. डिसिजन लिन गाह्रो त भइहाल्छ । आफ्नो लामो समयको सपना यही थियो । बीच बाटोमा आइसकेपछि सपना अलिकति एक्सपान्डेड भएको त हो नि । सजिलो त भएन निर्णय लिन । बनिबनाउ चिजहरु एकैचोटि छोड्न सजिलो थिएन । परिस्थितिले बनाएको हो ।
परिस्थिति भन्नाले कुन कुराले तपाईंलाई राजनीतिमा आउन बढी प्रेरित गर्यो ?
देशमा देखिएको जति पनि वितृष्णा छ, मेरो जुन तहका नागरिकसँग दिनदिनै भेटघाट हुन्छ । त्यो तहका नागरिकको समस्या कहिले पनि एड्रेस भएको देखिनँ । ५–६ वर्ष मैले जनताको जुन समस्या देखेँ, त्यो समस्यासँग राजनीतिको मुल धारको कुनै कनेक्सन नै पाइनँ । जनताको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखेपछि कति समस्या मात्रै सुनाउने र मान्छेहरुको पीडा मात्रै देखाएर बस्ने ? आफूले पनि नीतिगत तहमा योगदान दिन सकिन्छ कि ? भन्ने लागेको हो ।
राजनीतिमा लाग्ने तपाईंको पुरानै योजना थियो कि अपर्झट लिनुभएको निर्णय हो ?
मेरो अलिक अगाडिको माइन्डसेट हो । पोलिटिक्समा नै जोडिन्छु होला कुनै न कुनै रुपमा भन्ने थियो, तर कुन ढंगको भन्ने चाहिँ थिएन । अलि अगाडिदेखि मेरो माइन्डमा कहीँ न कहीँ थियो ।
बालेन साहले स्वतन्त्र जितेपछि तपाईं पनि हौसिनुभएको भन्दैछन् नि कतिपयले ?
त्यस्तो होइन । तपाईंले मेरो २०१० देखिकै डिटेलहरु हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ । १२ वर्षदेखि यसको बारेमा सोचिरहेको छु ।
तपाईंले राजनीति गर्ने वा भोट माग्ने मुख्य एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ ?
त्यो पनि मैले अहिले बताउन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेलाई यत्ति हो कि सञ्चारकर्मबाट मैले विश्राम लिएँ । पोलिटिक्समा आउँदैछु । योभन्दा अर्को चिज मसँग केही पनि छैन ।
यदि चुनावमा सोचेजस्तो रिजल्ट आएन भने फेरि पुरानो पेशामा फर्किनुहुन्छ वा राजनीतिलाई नै निरन्तरता दिनुहुन्छ ?
त्यो पनि सोच्न पाएको छैन मैले अहिले । त्यस्तो पार्टिकुलर केही छैन । गर्ने चिज धेरै छन् नि यो दुनियाँमा ।
तपाईं काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ३ बाटै चुनाव लड्ने हो ?
देशैभरिबाट कुराहरु आइरहेको छ । मैले देशभरिका नागरिकको समस्यामा काम गरिरहेकाले यही क्षेत्र भन्ने छैन । ७ गतेसम्ममा टुंगो लाग्छ । म भोटर भएको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ ३ हो । काठमाडौंमै हुर्केको हुनाले अलिकति झुकाव त काठमाडौंमा हुने नै भयो ।
प्रकाशित: २०७९ असार २ गते २०:०७
2 thoughts on “सबै पार्टीले प्रस्ताव गरेका छन्, अप्सनहरू खुल्ला राखेको छुः रवि लामिछाने”
Shreelal yadav says:
##रबि दाइ,बालेन#हर्क,हमाल इत्यादि सब एक भएर पार्टी निर्माण तिर लागौ एउटा लौरो भन्दा 10 वटा लौरो बलियो###so we havev hope to you will be do that….##best of luck daaii💕💕🇳🇵🇳🇵🇳🇵🙏🙏
राप्रपा मा भुलेर पनि नजाऊ काम छैन।
प्रदेश १ मा ‘किरात’ माग्नेहरु अभ्रष्ट, लिम्बुवान माग्नेहरु भ्रष्ट भन्ने हुँदैन
प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश राख्न पहिचानवादीबीच नै मतभेद छ: उपेन्द्र सुब्बा
कानून त्रुटिपूर्ण छ, बलात्कारमा हदम्याद हटाए अनाहकमा पुरुषहरू बर्बाद हुन्छन्: अधिवक्ता ठाकुर
चुरेको छातीमा मदन भण्डारी राजमार्ग किन ?: पूर्वराष्ट्रपति यादव (भिडिओ)
केपी ओलीका कारण संघीयता प्रभावकारी भएनः मुख्यमन्त्री पाण्डे
६ वर्षे प्रतिबन्धपछि आधार शिविरबाट ६ दिनमै सगरमाथाकाे चुचुराे पुगेँ- भारतीय आरोही यादव
मुकुन्द रिजाललाई प्रश्नः बालेन्द्रलाई असफल पार्ने खेल सुरु गर्नुभएको हो ? (भिडिओ)
नेताहरूको स्वार्थ र सनकको कोपभाजनमा संसद परेको झलनाथको टिप्पणी
जनताप्रति उत्तरदायी शासन संसदीय लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भवः प्रधानमन्त्री देउवा
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न वामदेव गौतम बालकोटमा
एनआईसी एशिया बैंकमा एक लाख राख्दा १० पाइने ‘एनआईसी एशिया सर्वश्रेष्ठ १० गुणा मुद्दती योजना’
३०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य